Part 1: Common mbipụta banyere ibuga data si HTC ka Blackberry.
Part 2. Free ụzọ: Olee nyefee data si HTC ka Blackberry
Part 3. Olee Blackberry ngwaọrụ ị na-eji?
Chọrọ nyefee ekwentị gị data si HTC ka Blackberry? Ọ bụ otu n'ime ndị dị oké njọ nsogbu chere ihu site ọrụ nke HTC ntị, na-ebufe data aghọwo a egbochi, ma e nwere ihe ngwọta maka ihe niile. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-amụta banyere ndị nkịtị mbipụta na ụzọ nyefee data si HTC ka Blackberry. Ka mbụ maara banyere mbipụta na ọrụ na-eche ihu ka na-enyefe ha data:
Ime a Bluetooth transfer bụghị apụtakarị, na e nwere mbipụta ka na-enyefe data gị HTC ekwentị Blackberry.
Ime data transfer-aghọ a egbochi n'ihi na ọrụ na-eme ka a transfer atọ ọzọ omume na-achọrọ na mgbe ụfọdụ a akụkụ nke data na-agafere eduga ọnwụ nke dị mkpa data.
Nkịtị nsogbu chere ihu site ọrụ bụ ha na-apụghị ime kpọmkwem data transfer kpọmkwem na mkpa a-atọ ndị ọzọ omume ime ka data nyefe.
Nyefee data nyefe si HTC ka blackberry for free bụ a abụọ-nzọụkwụ usoro ebe ị na-chọrọ:
Mbupụ data si gị HTC ekwentị gị na kọmputa. Mbupụ data na kọmputa gị nanị jikọọ gị HTC ekwentị na kọmputa gị na eriri USB, a ọhụrụ mkparịta ụka igbe ga-apụta, na-emeghe ya na mgbe idetuo na mado gị data ke iche iche ọhụrụ nchekwa.
Mbubata data site na PC gị ọhụrụ gị Blackberry ekwentị. Mbubata depụtaghachiri data, jikọọ gị Blackberry ekwentị na kọmputa na a ọhụrụ igbe ga-egosi na ihuenyo na họrọ faịlụ transfer nhọrọ. Na kọmputa gị, na-emeghe blackberry Desktọpụ Software na pịa media transfer nhọrọ na suut ihe ị chọrọ ime.
1 click ekwentị na ekwentị transfer ngwá ọrụ: Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans Bụ a otu nkwụsị omume iji na ị nwere ike mfe nyefee gị data enweghị ihe ọ bụla ọnwụ. Ị nwere ike mfe idetuo Ndi ana-akpo, SMS, na foto enweghị ihe ọ bụla Loss. Ọ bụghị naanị na kọntaktị transfer ma i nwere ike iṅomi ederede ozi, na-akpọ abanye, foto, music, videos na android ngwa n'etiti ngwaọrụ na nanị otu click.
Nkwado ruo 3000+ Popular Devices & ọhụrụ OS
Ọ arụ ọrụ zuru okè na Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Sony, Google, Huawei, Motorola, ZTE, na ndị ọzọ mobile ụdị.
Ọ na-enye enweghị nkebi ahụmahụ n'agbanyeghị nke Cellular Carriers. Nkwado data nyefe si nkwekọrịta ntị ka ọ dịghị-nkwekọrịta cell igwe.
Ọrụ nwere ike mfe ndabere si Old na ekwentị PC na Weghachi ka New One mgbe e mesịrị.
Ọrụ nwere ike nyefee iTunes / iCloud ka ọ bụla ekwentị. Ọ bụghị naanị na transfer songs na listi ọkpụkpọ ọrụ nwekwara ike weghachite iTunes / iCloud / Kies / Blackberry nkwado ndabere na mpaghara transfer kọntaktị, foto, video, ederede ozi, wdg ọ bụla na-akwado ngwaọrụ mkpanaaka.
A smartphone bụ a okwu bụ mgbe eji synonymously na Blackberry igwe. Blackberry igwe na-mgbe mara maka àjà ngwa ngwa email na izi ozi ọrụ ya ọrụ. Blackberry igwe na QWERTY keyboards mere ka ha Wezuga ama na n'ọtụtụ ebe na n'ụwa nile. Ebe a bụ ndepụta nke kasị mma Blackberry igwe dị na USA:
Blackberry Z10 bụ a gbara ọkpụrụkpụ Blackberry ngwaọrụ a siri ike ọhụrụ sistemụ. Ya atụmatụ na-agụnye touchscreen, ihu-Facing igwefoto, High-Mkpebi Igwefoto, HD Video ndekọ, Mpụga Nchekwa, wdg
Ẹkedori OS version: Blackberry 10
Hapụ Ahịa: $ 199
Uru: Ezi-na-achọ imewe, oru oma sistemụ, na Ezi arụmọrụ.
Cons: Mkpa ọzọ ngwa.
Blackberry Q10 atụmatụ Touch ihuenyo, Front-eche ihu igwefoto, Nkịtị keyboard, Mpụga Nchekwa, High- Mkpebi igwefoto, HD Video na ndekọ na 4G.
Hapụ Ahịa: $ 630
Uru: kọmpat imewe, ala keyboard, Easy & Quick Izi ozi.
Cons: Obere ihuenyo.
3. Blackberry Omuma
Blackberry Omuma bụ kasị mara maka ya ndị magburu onwe ndụ batrị, na ebube igodo na-eme ka ọhụrụ Blackberry ihe dị mfe oke maka ya ọrụ.
Hapụ price $449.99
Uru: Ezi Ogo ngwaahịa, Keyboard, na trackpad bụ inogide.
Cons: Ụfọdụ Android ngwa ọdịnala na-efu.
Blackberry si Passport bụ a kediegwu ekwentị na a square udi ihuenyo na a mma keyboard. Ọ bụ ihe kasị mma maka mmeghe spreadsheets na-arụ ọrụ na ekwentị.
Hapụ Ahịa: $ 249
Uru: Square ngosi ezigbo maka ikiri akwụkwọ.
Cons: Ọ dịghị onye
Blackberry Z30 enye ogologo ndụ batrị na na ulo oru na siri ike sistemụ ndozi. Ya atụmatụ na-agụnye touchscreen, ihu-Facing igwefoto, mpụga nchekwa, High-mkpebi igwefoto, HD video ndekọ, na 4G.
Sistemụ: Blackberry OS
Uru: Ogologo ndụ batrị na Solid Mee.
Cons: App nhọrọ lags n'azụ Android na iOS
6. Blackberry amalinụ Elu
Ọhụrụ Blackberry itu ukwu bụ a na-atụ aro ekwentị na ya vibrant na elu-àgwà ihuenyo-aga nke ọma gị ọkwa.
ORelease price $274.99
Uru: n'Ihe Omume ihuenyo, magburu onwe ndụ batrị.
Cons: Igwefoto siiri na ala-ìhè na abalị.
Blackberry Porsche Design nwere mara mma mputa (satin igwe anaghị agba nchara ikpe na aka-mere Italian akpụkpọ anụ azụ). Nlereanya a na-eburu 1.5GHz sọrọ-isi processor, 64 GB nke nchekwa na ebe nchekwa, 8-megapixel igwefoto, 2GB nke Ram, na a 4.2-anụ ọhịa ngosi na 1280 x 768 mkpebi na a pixel njupụta nke 356ppi.
Uru: Battery na ruo awa itoolu (ma ọ bụ 540 nkeji) nke okwu oge.
Cons: Limited ụdịdị
Blackberry 9720 bụ a BB ekwentị na ọtụtụ atụmatụ gụnyere a raara onwe ya nye BBM n'akụkụ bọtịnụ maka ohere ngwangwa ka niile mkparịta ụka unu. Nlereanya a na-akwado a 5-megapixel igwefoto na Ikanam flash na a QWERTY keyboard n'okpuru ya pụrụ iche igodo panel.
Uru: Easy Izi ozi
Blackberry Z3 bụ Blackberry mgbalị iji nye ya ọrụ na zuru touchscreen ụdị. The Z3 awade ọtụtụ mbinye aka atụmatụ n'akụkụ BB ihuenyo Reader na Bulie apps n'ihi na ọrụ na ndị ogbenye na anya.
Uru: Enwekwukwa readability na ihuenyo.
Cons: ole na ole ngwa
The Blackberry Q5 ọkụ ka iPhone klas ya 720 x 720 ngosi. Ya a sọrọ-isi 2.4 GHz Snapdragon S4 processor na awade otu nnukwu okwu oge nke 750 nkeji. Ọ na-akwado a 5-megapixel isi igwefoto (na 4-mmewere oghere).
Uru: Battery Life
> Resource> Android> otú nyefee Data si HTC ka Blackberry